आउँदैछन् कीरा–फट्यांग्राजस्तै उफ्रिन र उड्न सक्ने साना रोबोट ! :: Setopati
आउँदैछन् कीरा–फट्यांग्राजस्तै उफ्रिन र उड्न सक्ने साना रोबोट !
सिएनएन असोज ११
पिट्सबर्गको कार्निगिया मेलोन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक जेनेप तेमिल यति बेला आफ्नो ल्याबमा व्यस्त छिन्। उनी केही प्रश्न र उत्तरहरूको खोजीमा छिन्।
उनको प्रश्न छ– ठूल्ठूला कामका लागि ठूलै रोबोट चाहिने हो? आकारमा ठूलो हुँदैमा मेसिन शक्तिशाली हुन्छ भन्ने हुन्छ? सानो आकारकै रोबोटले मान्छेले जतिकै काम गर्न सक्षम छन् त? र मुख्यतः पानीमा तैरन सक्ने, हावामा उड्न सक्ने र छतमा समेत उफ्रन सक्ने कुनै यस्तो रोबोट बनाउन सम्भव छ?
यी सब प्रश्नको उत्तरको खोजीमा रहेकी उनले छिट्टै यसको उत्तर पाउँदैछिन्। किनकी अब कीरा-फट्याङ्ग्रा आकारका र यसको जस्तै विशेषता भएका रोबोट तयार हुँदैछन्।
साना रोबोटहरू चिकित्सा प्रयोगमा उपयोगी हुनसक्ने जेनेप विश्वास राख्छिन्। त्यस्तै यो औषधि वितरण र सामान्य शल्यक्रियामा समेत उपयोगी सावित हुनसक्ने उनी बताउँछिन्। साना रोबोटले मान्छेलाई कुनै खानीहरुमा, खोजी तथा उद्धारमा निकै मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।
‘यदि तपाईंसँग सानो कीरा आकारको रोबोट छ भने यसले तपाईंको काम सहज र सुरक्षित ढंगबाट सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउनेछ,’ जेनेपले सिएनएनलाई भनेकी छन्, ‘मान्छेहरू मात्र होइन, ठूलो रोबोटको पहुँच नहुने जोखिमपूर्ण ठाउँमा यस प्रकारका रोबोट निकै उपयोगी हुन सक्छ।’
साना रोबोटहरू समूहमा काम गर्छन्। जस्तै सानो आकारका जीव, कमिला र मौरीले समूहमै काम गर्छन्।
‘यो मोड्युलर रोबटहरूले अन्तरिक्ष यात्रीलाई अज्ञात वातावरणमा समेत मद्दत पुर्‍याउनेछ भन्ने आशा राखेको छु,’ स्विस फेडरल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक र निर्देशक जेमी पेइकले भनेका छन्।
कीरा-फट्याङ्ग्रा आकारका रोबोट परीक्षणमा कमिला प्रेरणाको स्रोत बनेको उनले बताएका छन्। कमिला ताँतीमा काम गर्छ। यिनीहरू आफ्नो शरीरको तौलभन्दा बढी भारी बोक्न सक्छन्। माटो, बालुवामा सहजै हिँड्न सक्छन् र काम गर्न सक्छन्। आफ्ना लागि आवश्यक परे आफूलाई ठिक्क हुने पुल पनि बनाउँछन्।
टोलीका सदस्यसमेत रहेका पेइकका अनुसार ट्रयाप-ज प्रजातिका कमिला यसको प्रेरणा स्रोत हुन्। यसका कारण ब्याट्रीबाट सञ्चालित हत्केलामा अट्ने आकारको रोबोट बनाइयो। यी रोबोट जस्तोसुकै वातावरणमा अनुकूल रहन सक्नुका साथै सहकार्य पनि गर्न सक्छन्।
ट्रयाप-ज कमिला शिकारीबाट बच्न निकै चनाखो हुन्छन्। प्रतिघन्टा ९० माइलको गतिमा उफ्रन सक्छन्। पेइक र उनको टोलीले रोबोटमा यही कमिलाको मेकानिक अनुरुप नयाँ रोबोट बनाए, जो उचाइबाट ठाडो उड्न सक्छ, लामो दुरीबाट तेर्सो उफ्रन पनि सक्छ, अवरोधबीच पनि उफ्रन सक्छ, र जस्तोसुकै सतहमा हिँड्न वा घिस्रन सक्छ।
कमिलामा जस्तै यो रोबोटको प्रत्येक एकाई पूर्ण स्वतन्त्र छ। तर तिनीहरू एकअर्कासँग ट्रान्समिटरमार्फत जोडिएका हुन्छन्।
सानो आकारमा बनेका रोबोटको अर्को पनि फाइदा रहेको पेइक बताउँछन्। ठूला रोबोटका तुलनामा यी सस्तो हुन्छन्।
‘हामी त्यस्ता रोबोट बिग्रेमा फाल्न सक्छौं। र, यदि कहीँकतै हराइहाले वा फुटिहाले यसलाई दिइएको काम यसले पूरा गर्न सक्छ,’ पेइकले भने।